အထွေထွေ – Tamarmyay.com
တောက် တက် ဟာ ဘယ်ေ နရာတွေ ၌ အသုံး ဝင်လို့ဂျပန် မှာ ရောင်း အားေ ကာင်းေ န တာ လဲ?
တချို့က ကျွန်တော့်ကိုမေးထားကြတယ်..ကိုခါး ခင်ဗျ တောက်တက် ဝယ်ယူနေကြတာတွေရှိနေတော့ တောက်တက်ဟာ ဘယ်နေရာတွေ၌ အသုံးဝင်ပါသလဲတဲ့…?
ဟုတ်ကဲ့ပါ…တောက်တက်ကို Some believe the Tokay Gecko can be used to help treat the HIV virus. … The geckos, popular as pets in Asia, have long been used as traditional medicine for illnesses such as diabetes, asthma, skin disease and cancer, the report said. Their carcasses are dried up and ground into powder for consumption အေ၊အိုင်၊ဒီ၊အက် (HIV)ရောဂါပိုးတိုက်ဖျက်တဲ့နေရာမှာ အချို့က ယုံကြည်စွာအသုံးပြုကြတယ်။ပြီးတော့ စိတ်မကျန်းမမာဖြစ်ခြင်း၊ဆီးချို၊ပန်းနာရင်ကြပ်၊အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါနှင့်ကင်ဆာရောဂါတို့အတွက် တောက်တက်အခြောက်ကို အမှုန့်ကြိတ်ပြီး သောက်သုံးကြပါတယ်။
ပြီးတော့..အလွန်ကြီးမားသော တောက်တက်တွေရဲ့ အမြီး၌ရှိသော အဆီရည်ကို ထုတ်ယူပြီး နျူကလီယား(nuclear) အဆိပ်သင့် လူနာများကို ထိုးသွင်းကုသကြတယ်လို့ ဖတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။
တောက်တက်ဟာ တကယ်တော့ လူသားတို့အတွက် ဆေးဖက်ဝင် သတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်ပါကြောင်း..
ဟုတ်ကဲ့ပါ…တောက်တက်ကို အေ၊အိုင်၊ဒီ၊အက် (HIV)ရောဂါပိုးတိုက်ဖျက်တဲ့နေရာမှာ အချို့က ယုံကြည်စွာအသုံးပြုကြတယ်။ပြီးတော့ စိတ်မကျန်းမမာဖြစ်ခြင်း၊ဆီးချို၊ပန်းနာရင်ကြပ်၊အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါနှင့်ကင်ဆာရောဂါတို့အတွက် တောက်တက်အခြောက်ကို အမှုန့်ကြိတ်ပြီး သောက်သုံးကြပါတယ်။
တောကျ တကျ ဟာ ဘယျေ နရာတှေ ၌ အသုံး ဝငျလို့ ဂပြနျ မှာ ရောငျး အားေ ကာငျးေ န တာ လဲ?
တခြို့က ကြှနျတေျာ့ကိုမေးထားကွတယျ..ကိုခါး ခငျဗြ တောကျတကျ ဝယျယူနကွေတာတှရှေိနတေော့ တောကျတကျဟာ ဘယျနရောတှေ၌ အသုံးဝငျပါသလဲတဲ့…?
ဟုတျကဲ့ပါ…တောကျတကျကို Some believe the Tokay Gecko can be used to help treat the HIV virus. … The geckos, popular as pets in Asia, have long been used as traditional medicine for illnesses such as diabetes, asthma, skin disease and cancer, the report said. Their carcasses are dried up and ground into powder for consumption အေ၊အိုငျ၊ဒီ၊အကျ (HIV)ရောဂါပိုးတိုကျဖကျြတဲ့နရောမှာ အခြို့က ယုံကွညျစှာအသုံးပွုကွတယျ။ပွီးတော့ စိတျမကနျြးမမာဖွဈခွငျး၊ဆီးခြို၊ပနျးနာရငျကွပျ၊အရပွေားနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါနှငျ့ကငျဆာရောဂါတို့အတှကျ တောကျတကျအခွောကျကို အမှုနျ့ကွိတျပွီး သောကျသုံးကွပါတယျ။
ပွီးတော့..အလှနျကွီးမားသော တောကျတကျတှရေဲ့ အမွီး၌ရှိသော အဆီရညျကို ထုတျယူပွီး နြူကလီယား(nuclear) အဆိပျသငျ့ လူနာမြားကို ထိုးသှငျးကုသကွတယျလို့ ဖတျသားခဲ့ဖူးပါတယျ။
တောကျတကျဟာ တကယျတော့ လူသားတို့အတှကျ ဆေးဖကျဝငျ သတ်တဝါတဈမြိုးဖွဈပါကွောငျး..
ဟုတျကဲ့ပါ…တောကျတကျကို အေ၊အိုငျ၊ဒီ၊အကျ (HIV)ရောဂါပိုးတိုကျဖကျြတဲ့နရောမှာ အခြို့က ယုံကွညျစှာအသုံးပွုကွတယျ။ပွီးတော့ စိတျမကနျြးမမာဖွဈခွငျး၊ဆီးခြို၊ပနျးနာရငျကွပျ၊အရပွေားနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါနှငျ့ကငျဆာရောဂါတို့အတှကျ တောကျတကျအခွောကျကို အမှုနျ့ကွိတျပွီး သောကျသုံးကွပါတယျ။
Author admin adminPosted on March 21, 2018 Categories အထွေထွေLeaveacomment on တောက် တက် ဟာ ဘယ်ေ နရာတွေ ၌ အသုံး ဝင်လို့ဂျပန် မှာ ရောင်း အားေ ကာင်းေ န တာ လဲ?
ရန်သူ့နယ်မြေတစ်ခုလုံး နေရာလွတ်မကျန်ထောက်လှမ်းမဲ့ အမေရိကန် ကျိုင်းကောင်ဒရုန်းများ
Author adminPosted on March 21, 2018 Categories News, အထွေထွေLeaveacomment on ရန်သူ့နယ်မြေတစ်ခုလုံး နေရာလွတ်မကျန်ထောက်လှမ်းမဲ့ အမေရိကန် ကျိုင်းကောင်ဒရုန်းများ
ပရိ သတ်ေ တွ အံ့သြသွားလောက်အောင် အင်စတာဂရန် မှာ လန်းေ န တဲ့ လေယဉ် မယ်ေ လး မေပြည့် စုံေ အာင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လေယာဉ်မှူး အမိုက်စားလေးဆိုပြီး အမျိုးသားပရိသတ်တွေ အသေအလဲကြွေခဲ့ကြတဲ့ လေယာဉ်မှူးမလေး မေပြည့်စုံအောင် ဟာ သူမရဲ့ အင်စတာဂရန် မှာ ပရိသတ်တွေ ထင်မထား လောက်တဲ့ ပုံတွေ ကို ကျန်ခဲ့တဲ့ ၃နာရီဝန်းကျင်လောက်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ အင်စတာဂရန်မှ ပရိသတ်တွေအရမ်းကို အံ့အားသင့်သွား ရလောက်အောင်ပါဘဲ။ သူမဟာ ကိုယ်အလှကို အမြဲပြသသူဖြစ်ပြီး အရမ်းမိုက်တဲ့ ကိုယ်လုံးအလှပိုင်ရှင်လေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေထင်မထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ၀င်ကြည့်ပြီး ပုရိသတို့ရေ စိတ်တွေခုန်မနေကြနက်နော်။
ဆယ်လီအများစု ရဲ့ အလန်းစားပုံတွေကို တွေ့မြင်ရလေ့၇ှိတဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ ယခု နာမည်ကြီးနေတဲ့ မေပြည့်စုံအောင်ရဲ့ ပုံတွေကို ပရိသတ်တွေ သိရလေအောင် မျှဝေပေးလိုက်ကြပါဦး။ ချစ်ရပါသော မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်ကြီး ကျေးဇူးအထူးတင်၇ှိပါတယ်။
Source – mpsa instagram
ပရိ သတျေ တှ အံ့သွသှားလောကျအောငျ အငျစတာဂရနျ မှာ လနျးေ န တဲ့ လယေဉျ မယျေ လး မပွေညျ့ စုံေ အာငျ
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လယောဉျမှူး အမိုကျစားလေးဆိုပွီး အမြိုးသားပရိသတျတှေ အသအေလဲကွှခေဲ့ကွတဲ့ လယောဉျမှူးမလေး မပွေညျ့စုံအောငျ ဟာ သူမရဲ့ အငျစတာဂရနျ မှာ ပရိသတျတှေ ထငျမထား လောကျတဲ့ ပုံတှေ ကို ကနျြခဲ့တဲ့ ၃နာရီဝနျးကငျြလောကျက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
သူမရဲ့ အငျစတာဂရနျမှ ပရိသတျတှအေရမျးကို အံ့အားသငျ့သှား ရလောကျအောငျပါဘဲ။ သူမဟာ ကိုယျအလှကို အမွဲပွသသူဖွဈပွီး အရမျးမိုကျတဲ့ ကိုယျလုံးအလှပိုငျရှငျလေးလဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ပရိသတျတှထေငျမထားတဲ့ ပုံလေးတှကေို ဝငျကွညျ့ပွီး ပုရိသတို့ရေ စိတျတှခေုနျမနကွေနကျနျော။
ဆယျလီအမြားစု ရဲ့ အလနျးစားပုံတှကေို တှမွေ့ငျရလေ့၇ှိတဲ့ အငျစတာဂရမျမှာ ယခု နာမညျကွီးနတေဲ့ မပွေညျ့စုံအောငျရဲ့ ပုံတှကေို ပရိသတျတှေ သိရလအေောငျ မြှဝပေေးလိုကျကွပါဦး။ ခဈြရပါသော မိုမိုလေးခဈြပရိသတျကွီး ကြေးဇူးအထူးတငျ၇ှိပါတယျ။
Author admin adminPosted on March 20, 2018 Categories အထွေထွေLeaveacomment on ပရိ သတ်ေ တွ အံ့သြသွားလောက်အောင် အင်စတာဂရန် မှာ လန်းေ န တဲ့ လေယဉ် မယ်ေ လး မေပြည့် စုံေ အာင်
သေပြီးသည့်နောက် သင့်ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်သွားမလဲ?
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အချိန်နဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဇီဝရုပ်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝ ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အစဉ်အမြဲ ပြောင်းလဲလျက် ရှိနေပါတယ်။ လူတစ်ယောက် သေဆုံးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ သူ့ရဲ့ ဇီဝ ဖြစ်စဉ်တွေ ရပ်တန့်သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စတင် ပျက်စီးလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားသဘောနဲ့ဆိုရင်တော့ ဖြစ်တည်လာပြီးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပျက်ရတော့မယ့် အချိန် ရောက်ရှိလာတာပါပဲ။ လူတစ်ယောက် သေပြီးတဲ့နောက် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ယေဘုယျ ပြောင်းလဲမှုတွေကို အချိန်နဲ့ တကွ ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါမယ်။
(၁) သေပြီးသည့်နောက် စက္ကန့်ပိုင်း အကြာ
လူတစ်ယောက် သေဆုံးပြီးနောက် စက္ကန့်ပိုင်းအကြာမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု အားလုံး ငြိမ်သက်သွားပါမယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်ဟာလည်း အခန်းအပူချိန်သို့ ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) သေပြီးသည့်နောက် မိနစ်ပိုင်း အကြာ
သေဆုံးပြီး မိနစ်ပိုင်းအကြာမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ခြေတွေ လက်တွေ အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တောင့်တင်း သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲက ကြွက်သားမျာ ပြေလျော့ကျသွားခြင်းကြောင့် ဆီးနှင့် အညစ်အကြေးများ ထွက်ကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) သေပြီးသည့်နောက် ရက်ပိုင်းအကြာ
သေဆုံးပြီးသည့်နောက် ရက်ပိုင်းအကြာတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးများကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ အနံ့ဆိုးများ စတင် ထွက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) သေပြီးသည့်နောက် ရက်သတ္တပတ်အကြာ
သေဆုံးပြီးသည့်နောက် ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါများ အားလုံး အရည်ပျော်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) သေပြီးသည့်နောက် လပိုင်းအကြာ
သေဆုံးပြီးသည့်နောက် ၄ လ အကြာမှာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး စတင်ပုပ်သိုး ဆွေးမြည့်လာမှာ ဖြစ်ပြီး အရိုးစုသာ ကျန်တော့သည်အထိ အဲဒီ ဖြစ်စဉ်က ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
( Daily Hot News )
သပွေီးသညျ့နောကျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျ ဘယျလိုဆကျဖွဈသှားမလဲ?
လူ့ခန်ဓာကိုယျဟာ အခြိနျနဲ့ အမြှ ပွောငျးလဲနတေဲ့ ဇီဝရုပျအဖှဲ့အစညျး တဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဇီဝ ဖွဈစဉျတှကွေောငျ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ အစဉျအမွဲ ပွောငျးလဲလကျြ ရှိနပေါတယျ။ လူတဈယောကျ သဆေုံးသှားပွီ ဆိုတာနဲ့ သူ့ရဲ့ ဇီဝ ဖွဈစဉျတှေ ရပျတနျ့သှားပွီး ခန်ဓာကိုယျဟာ စတငျ ပကျြစီးလာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ တရားသဘောနဲ့ဆိုရငျတော့ ဖွဈတညျလာပွီးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ ပကျြရတော့မယျ့ အခြိနျ ရောကျရှိလာတာပါပဲ။ လူတဈယောကျ သပွေီးတဲ့နောကျ ဖွဈပျေါလာမယျ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ယဘေုယြ ပွောငျးလဲမှုတှကေို အခြိနျနဲ့ တကှ ဆကျလကျ ဖျောပွသှားပါမယျ။
(၁) သပွေီးသညျ့နောကျ စက်ကနျ့ပိုငျး အကွာ
လူတဈယောကျ သဆေုံးပွီးနောကျ စက်ကနျ့ပိုငျးအကွာမှာ ဦးနှောကျရဲ့ လှုပျရှားမှုတှကေ တဟုနျထိုး တိုးတကျလာမှာ ဖွဈပွီး နောကျဆုံးမှာတော့ ဦးနှောကျလှုပျရှားမှု အားလုံး ငွိမျသကျသှားပါမယျ။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အပူခြိနျဟာလညျး အခနျးအပူခြိနျသို့ ပွောငျးလဲသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
(၂) သပွေီးသညျ့နောကျ မိနဈပိုငျး အကွာ
သဆေုံးပွီး မိနဈပိုငျးအကွာမှာ ခန်ဓာကိုယျကွှကျသားတှေ အတှငျးမှာ ရှိတဲ့ ဓာတုပစ်စညျးတှေ ပွောငျးလဲမှုကွောငျ့ ခွတှေေ လကျတှေ အပါအဝငျ ခန်ဓာကိုယျဟာ တောငျ့တငျး သှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးထဲက ကွှကျသားမြာ ပွလြေော့ကသြှားခွငျးကွောငျ့ ဆီးနှငျ့ အညဈအကွေးမြား ထှကျကလြာမှာ ဖွဈပါတယျ။
(၃) သပွေီးသညျ့နောကျ ရကျပိုငျးအကွာ
သဆေုံးပွီးသညျ့နောကျ ရကျပိုငျးအကွာတှငျ ဘကျတီးရီးယားပိုးမြားကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျမှ အနံ့ဆိုးမြား စတငျ ထှကျပျေါလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
(၄) သပွေီးသညျ့နောကျ ရကျသတ်တပတျအကွာ
သဆေုံးပွီးသညျ့နောကျ ရကျသတ်တပတျအကွာတှငျ ကိုယျတှငျး အင်ျဂါမြား အားလုံး အရညျပြျောသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
(၅) သပွေီးသညျ့နောကျ လပိုငျးအကွာ
သဆေုံးပွီးသညျ့နောကျ ၄ လ အကွာမှာ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး စတငျပုပျသိုး ဆှေးမွညျ့လာမှာ ဖွဈပွီး အရိုးစုသာ ကနျြတော့သညျအထိ အဲဒီ ဖွဈစဉျက ဆကျလကျ ဖွဈပျေါနမှောပဲ ဖွဈပါတယျ။
Author admin adminPosted on March 20, 2018 Categories အထွေထွေLeaveacomment on သေပြီးသည့်နောက် သင့်ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်သွားမလဲ?
လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုလိုသူများ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်း
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ ဗဟိုလယ်ယာ မြေစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့သည် နေပြည်တော်ကောင်စီ အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် အသီးသီး၌ လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားခြင်း ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍
နိုင်ငံနှင့် တစ်ဝန်း ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းအပေါ် တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရေး အတွက် ပြည်ထောင်စု
အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူ အကြောင်းကြားချက်အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ အတွင်းကပင် ညွှန်ကြားချက်အသစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ
ရှေးယခင်က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် နည်းလမ်း
တချို့သော တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များတွင် လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုရန် ကိစ္စရပ်အတွက် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)
ရေးကူးခွင့်အတွက် တစ်ကြိမ်၊ လုပ်ငန်းစာတွဲ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် တစ်ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း နှစ်ကြိမ် တင်ပြနေရသောကြောင့်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသူ ကာယကံရှင်များ အဖို့ မလိုအပ်သော အချိန်ကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်။
ထိုသို့ကြန့်ကြာမှုအတွက် ပြည်သူလူထုမှ ဌာနအပေါ် အထင်အမြင် လွဲမှားခြင်း၊ ထိုသို့အဆင့်ဆင့် နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် အထက်၊ အောက် တင်ပြရမှု
ကြောင့် ဆောင်ရွက်ရသည့်အဆင့်အပေါ် မူတည်လျက် မသမာသော ဝန်ထမ်း အများအနေဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အကြောင်းပြု၍
အဂတိ လိုက်စားမှုများနှင့် ရုံးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ကိုယ်တိုင် မသွားရောက်နိုင်သော သူများအတွက်လည်း အမှုပွဲစားများကို
ငွေကြေးပိုမိုပေးရခြင်း စသည့်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
ဆိုးကျိုးများကို ဖြေလျှော့သည့် နည်းလမ်း
အထက်ပါ ဆိုးကျိုးများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ယခုအခါ လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားသည့် ကိစ္စ
ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) တည်းဟူသော သက်သေခံမြေပုံ၊ မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၆) တည်းဟူသော မြေရာဇဝင်
ရေကူးခြင်းအား သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ရေးကူးစေပြီး
နောက် လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် လုပ်ငန်းစာတွဲဖြင့် ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ တစ်ကြိမ်တည်း စိစစ်ခွင့်ပြု
ခြင်း လုပ်ငန်းကိုတစ်နိုင်ငံလုံးတစ်ပြေးညီကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက်ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ ပြည်ထောင်စု
အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခဲ့ခြင်း အပေါ် တင်ပြသည့် အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုရန် လျှောက်ထားခြင်း
သို့ဖြစ်ပေရာ လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ယခင်ကလို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းမရှိတော့ဘဲ သက်ဆိုင်
ရာ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနတွင် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆) ရေးကူး၍ လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ /
၃၀(က) / ၃၀(ခ) အရ လုပ်ငန်းစာတွဲ ဖွင့်လှစ်တည်ဆောက်ရန်ပင် ရှိပါတော့သည်။ သို့သော် မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်
နယ်၏ အဆင့်ဆင့် ထောက်ခံမှုအရ လယ်မြေဖြစ်ပါက ဗဟိုလယ်ယာ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ အခြား လယ်ယာမြေ ဖြစ်ပါက နေပြည်
တော်ကောင်စီ သို့မဟုတ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ -၂၉ / ၃၀ (က) / ၃၀(ခ) အရ လုပ်ငန်းစာတွဲ ဖွင့်လှစ်သည့် အခါတွင်မူ လျှောက်ထားသူများ အနေဖြင့် အောက်ပါစာရွက်
စာတမ်း၊ အထောက်အထားများအား ပြည့်စုံစွာ ပူးတွဲတင်ပြရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။(က) လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြု
ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာပုံစံ – ၁၄၊ (ခ) မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆)၊ (ဂ)ပတ်ဝန်းကျင်ပြ မြေပုံ၊ (ဃ) မြေတည်ရှိရာ အခြေပြမြေပုံ
(Location Map) ၊ (င) ဆိုက်ပလင်(Site Plan) ၊ (စ) ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ၊ (ဆ) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ်
(ပုံစံ-၇) မိတ္တူ၊ (ဇ) ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်စု လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်၊ (ဈ) လျှောက်ထားသူ၏ ဝန်ခံချက်၊
(ည) ဘေးပတ်ဝန်းကျင် လယ်သမားနှစ်ဦး၏ ထွက်ဆိုချက်၊ (ဋ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)၊
လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုရန် လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စရပ်များအနက် လယ်မြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့်
ပုံစံ(၁၅) ကို ရရှိရေးအတွက် ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အထိ လုပ်ငန်းစာတွဲပေးပို့တင်ပြကြရပြီး လယ်မြေမဟုတ်သော
အခြား လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံ (၁၅-က) ကိုသာ နေပြည်တော်ကောင်စီသို့ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်
နယ် အစိုးရအဖွဲ့များက ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
ယခုအခါ တချို့သောတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ (ဥပမာ- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ
ကြီး) များက လယ်မြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားမှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်သည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
ဆိုသော် လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားလိုသော လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) အဖွဲ့အစည်းများ အနေနှင့် လယ်မြေဖြစ်
စေ၊ လယ်မြေမဟုတ်သော အခြားလယ်ယာမြေကိုဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်း ဦးစီး
ဌာနရုံးများတွင် မြေစာရင်း ပုံစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆) လုပ်ငန်းစာတွဲနှင့် အတူ ပူးတွဲလျှောက်ထားကြရုံသာ ရှိတော့သဖြင့် ယခင်ကထက်
ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့ လွယ်ကူလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတော့သည်။
Source : မြန်မာတောင်သူကြီးများ ဂျာနယ်
လယျယာမွကေို အခွားနညျး အသုံးပွုလိုသူမြား ဝမျးမွောကျဖှယျသတငျး
ပွညျထောငျစု သမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော အစိုးရ၊ ဗဟိုလယျယာ မွစေီမံခနျ့ခှဲမှု အဖှဲ့သညျ နပွေညျတျောကောငျစီ အပါအဝငျ တိုငျးဒသေကွီး၊ ပွညျနယျ အသီးသီး၌ လယျယာမွကေို အခွားနညျး အသုံးပွုရနျ လြှောကျထားခွငျး ကိစ်စရပျနှငျ့ ပတျသကျ၍
နိုငျငံနှငျ့ တဈဝနျး ပုံစံအမြိုးမြိုးဖွငျ့ ဆောငျရှကျနကွေခွငျးအပျေါ တဈနိုငျငံလုံး တဈပွေးညီဖွဈစရေေး အတှကျ ပွညျထောငျစု
အစိုးရအဖှဲ့၏ သဘောတူ အကွောငျးကွားခကျြအရ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ မတျလ အတှငျးကပငျ ညှနျကွားခကျြအသဈ ထုတျပွနျခဲ့ပါ
ရှေးယခငျက ဆောငျရှကျခဲ့သညျ့ နညျးလမျး
တခြို့သော တိုငျးဒသေကွီး၊ ပွညျနယျမြားတှငျ လယျယာမွကေို အခွားနညျး အသုံးပွုရနျ ကိစ်စရပျအတှကျ မွစောရငျးပုံစံ (၁၀၅)
ရေးကူးခှငျ့အတှကျ တဈကွိမျ၊ လုပျငနျးစာတှဲ တညျဆောကျခွငျးအတှကျ တဈကွိမျ၊ စုစုပေါငျး နှဈကွိမျ တငျပွနရေသောကွောငျ့
လုပျငနျးဆောငျရှကျလိုသူ ကာယကံရှငျမြား အဖို့ မလိုအပျသော အခြိနျကွနျ့ကွာမှုမြား ဖွဈပျေါခဲ့ရသညျ။
ထိုသို့ကွနျ့ကွာမှုအတှကျ ပွညျသူလူထုမှ ဌာနအပျေါ အထငျအမွငျ လှဲမှားခွငျး၊ ထိုသို့အဆငျ့ဆငျ့ နှဈကွိမျတိုငျအောငျ အထကျ၊ အောကျ တငျပွရမှု
ကွောငျ့ ဆောငျရှကျရသညျ့အဆငျ့အပျေါ မူတညျလကျြ မသမာသော ဝနျထမျး အမြားအနဖွေငျ့ လုပျပိုငျခှငျ့ကို အကွောငျးပွု၍
အဂတိ လိုကျစားမှုမြားနှငျ့ ရုံးဌာန၊ အဖှဲ့အစညျးမြားသို့ ကိုယျတိုငျ မသှားရောကျနိုငျသော သူမြားအတှကျလညျး အမှုပှဲစားမြားကို
ငှကွေေးပိုမိုပေးရခွငျး စသညျ့ဆိုးကြိုးမြား ဖွဈပျေါခဲ့ပါသညျ။
ဆိုးကြိုးမြားကို ဖွလြှေော့သညျ့ နညျးလမျး
အထကျပါ ဆိုးကြိုးမြားကို ရှောငျရှားနိုငျရနျအတှကျ ယခုအခါ လယျယာမွကေို အခွားနညျး အသုံးပွုခှငျ့ လြှောကျထားသညျ့ ကိစ်စ
ရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ မွစောရငျးပုံစံ (၁၀၅) တညျးဟူသော သကျသခေံမွပေုံ၊ မွစောရငျးပုံစံ (၁၀၆) တညျးဟူသော မွရောဇဝငျ
ရကေူးခွငျးအား သကျဆိုငျရာ လယျယာမွေ စီမံခနျ့ခှဲရေးနှငျ့ စာရငျးအငျးဦးစီးဌာန၏ လုပျထုံးလုပျနညျးမြားအတိုငျး ရေးကူးစပွေီး
နောကျ လယျယာမွကေို အခွားနညျးအသုံးပွုခှငျ့ လုပျငနျးစာတှဲဖွငျ့ ပူးတှဲ၍ သကျဆိုငျရာ အစိုးရအဖှဲ့ တဈကွိမျတညျး စိစဈခှငျ့ပွု
ခွငျး လုပျငနျးကိုတဈနိုငျငံလုံးတဈပွေးညီကငျြ့သုံးဆောငျရှကျနိုငျစရေေးအတှကျဗဟိုလယျယာမွစေီမံခနျ့ခှဲမှုအဖှဲ့မှ ပွညျထောငျစု
အစိုးရအဖှဲ့သို့ တငျပွခဲ့ခွငျး အပျေါ တငျပွသညျ့ အတိုငျးဆောငျရှကျရနျ သဘောတူခှငျ့ပွုခဲ့ခွငျး ဖွဈပါသညျ။
လယျယာမွကေို အခွားနညျးအသုံးပွုရနျ လြှောကျထားခွငျး
သို့ဖွဈပရော လယျယာမွကေို အခွားနညျး အသုံးပွုလိုသူမြားအတှကျ ယခငျကလို နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာခွငျးမရှိတော့ဘဲ သကျဆိုငျ
ရာ လယျယာမွစေီမံခနျ့ခှဲရေးနှငျ့ စာရငျးအငျးဦးစီးဌာနတှငျ မွစောရငျးပုံစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆) ရေးကူး၍ လယျယာမွဥေပဒပေုဒျမ ၂၉ /
၃၀(က) / ၃၀(ခ) အရ လုပျငနျးစာတှဲ ဖှငျ့လှဈတညျဆောကျရနျပငျ ရှိပါတော့သညျ။ သို့သျော မွို့နယျ၊ ခရိုငျ၊ တိုငျးဒသေကွီး၊ ပွညျ
နယျ၏ အဆငျ့ဆငျ့ ထောကျခံမှုအရ လယျမွဖွေဈပါက ဗဟိုလယျယာ မွစေီမံခနျ့ခှဲမှုအဖှဲ့၊ အခွား လယျယာမွေ ဖွဈပါက နပွေညျ
တျောကောငျစီ သို့မဟုတျ၊ တိုငျးဒသေကွီး၊ ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့၏ ခှငျ့ပွုခကျြကို ရယူရနျသာ လိုအပျပါသညျ။
လယျယာမွဥေပဒေ ပုဒျမ -၂၉ / ၃၀ (က) / ၃၀(ခ) အရ လုပျငနျးစာတှဲ ဖှငျ့လှဈသညျ့ အခါတှငျမူ လြှောကျထားသူမြား အနဖွေငျ့ အောကျပါစာရှကျ
စာတမျး၊ အထောကျအထားမြားအား ပွညျ့စုံစှာ ပူးတှဲတငျပွရနျလိုအပျမညျဖွဈပါသညျ။(က) လယျယာမွကေို အခွားနညျး အသုံးပွု
ခှငျ့ပွုရနျ လြှောကျလှာပုံစံ – ၁၄၊ (ခ) မွစောရငျးပုံစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆)၊ (ဂ)ပတျဝနျးကငျြပွ မွပေုံ၊ (ဃ) မွတေညျရှိရာ အခွပွေမွပေုံ
(Location Map) ၊ (င) ဆိုကျပလငျ(Site Plan) ၊ (စ) ဓာတျပုံမှတျတမျးမြား၊ (ဆ) လယျယာမွေ လုပျပိုငျခှငျ့ပွု လကျမှတျ
(ပုံစံ-၇) မိတ်တူ၊ (ဇ) ရပျကှကျ၊ ကြေးရှာ အုပျစု လယျယာမွေ စီမံခနျ့ခှဲမှုအဖှဲ့၏ ထောကျခံခကျြ၊ (ဈ) လြှောကျထားသူ၏ ဝနျခံခကျြ၊
(ည) ဘေးပတျဝနျးကငျြ လယျသမားနှဈဦး၏ ထှကျဆိုခကျြ၊ (ဋ) လြှောကျထားသူ၏ မှတျပုံတငျ (မိတ်တူ)၊
လယျယာမွကေို အခွားနညျးအသုံးပွုရနျ လြှောကျထားသညျ့ကိစ်စရပျမြားအနကျ လယျမွကေို အခွားနညျး အသုံးပွုရနျ ခှငျ့ပွုမိနျ့
ပုံစံ(၁၅) ကို ရရှိရေးအတှကျ ဗဟိုလယျယာမွေ စီမံခနျ့ခှဲမှုအဖှဲ့အထိ လုပျငနျးစာတှဲပေးပို့တငျပွကွရပွီး လယျမွမေဟုတျသော
အခွား လယျယာမွကေို အခွားနညျးအသုံးပွုရနျ ခှငျ့ပွုမိနျ့ပုံစံ (၁၅-က) ကိုသာ နပွေညျတျောကောငျစီသို့ တိုငျးဒသေကွီး၊ ပွညျ
နယျ အစိုးရအဖှဲ့မြားက ထုတျပေးပိုငျခှငျ့ ရှိသညျ။
ယခုအခါ တခြို့သောတိုငျး ဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့ (ဥပမာ- ရနျကုနျတိုငျးဒသေ
ကွီး) မြားက လယျမွကေို အခွားနညျး အသုံးပွုခှငျ့ လြှောကျထားမှုကို တားမွဈပိတျပငျလိုကျသညျဟု ကွားသိရပါသညျ။
ဆိုသျော လယျယာမွကေို အခွားနညျးအသုံးပွုခှငျ့ လြှောကျထားလိုသော လူပုဂ်ဂိုလျ (သို့) အဖှဲ့အစညျးမြား အနနှေငျ့ လယျမွဖွေဈ
စေ၊ လယျမွမေဟုတျသော အခွားလယျယာမွကေိုဖွဈစေ၊ သကျဆိုငျရာ မွို့နယျလယျယာမွေ စီမံခနျ့ခှဲရေးနှငျ့ စာရငျးအငျး ဦးစီး
ဌာနရုံးမြားတှငျ မွစောရငျး ပုံစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆) လုပျငနျးစာတှဲနှငျ့ အတူ ပူးတှဲလြှောကျထားကွရုံသာ ရှိတော့သဖွငျ့ ယခငျကထကျ
ပိုမိုအဆငျပွခြေောမှေ့ လှယျကူလာနိုငျမညျဖွဈကွောငျး အသိပေးရေးသား တငျပွလိုကျရပါတော့သညျ။
Source : မွနျမာတောငျသူကွီးမြား ဂြာနယျ
Author admin adminPosted on March 20, 2018 Categories အထွေထွေLeaveacomment on လယ်ယာမြေကို အခြားနည်း အသုံးပြုလိုသူများ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်း
လူပြောများနေတဲ့ မြတ်ကေသီအောင် နဲ့ နေတိုးတို့ ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း
ယခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီ တစ်ပြေးနေတဲ့ နေတိုး နဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည့်အ၀ရရှိထားတဲ့ မြတ်ကေသီအောင်တို့ဟာ စပွန်ဆာ ဆိုတဲ့ ရုပ်၇ှင်ကားကြီးတစ်ကားမှာ အတူရိုက်ကူး နေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုက လဲရှိနေပြန်ပါတယ်။ မြတ်ကေသီအောင်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရိုက်ကွင်းပေါ်က ပုံတစ်ချို့ကို ဖော်ပြရင်းကနေ သူတို့ရဲ့ ကုတင်ပေါ်က ဇာတ်ဝင်ခန်းရိုက်ကွင်းကို ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ စပွန်ဆာ ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို နေတိုး၊ရဲလေး၊ ကျော်ကျော်၊ ပိုင်ဖြိုးသု၊ မြတ်ကေသီအောင်၊ချောကလျာ နဲ့ အဖြားသောအနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ဒါရိုက်တာ အောင်ဇော်လင်း က ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ သူတို့ရဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်က ပုံရိပ်တစ်ချို့ကိုလဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ချစ်ရတဲ့ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်ကြီး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
လူပွောမြားနတေဲ့ မွတျကသေီအောငျ နဲ့ နတေိုးတို့ ရဲ့ ဇာတျဝငျခနျး
ယခုနှဈအတှကျ အကယျဒမီ တဈပွေးနတေဲ့ နတေိုး နဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ မွတျကသေီအောငျတို့ဟာ စပှနျဆာ ဆိုတဲ့ ရုပျ၇ှငျကားကွီးတဈကားမှာ အတူရိုကျကူး နကွေပါတယျ။ အဲ့ဒီကားထဲမှာ ပရိသတျတှစေိတျဝငျစားနကွေတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးတဈခုက လဲရှိနပွေနျပါတယျ။ မွတျကသေီအောငျက သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ရိုကျကှငျးပျေါက ပုံတဈခြို့ကို ဖျောပွရငျးကနေ သူတို့ရဲ့ ကုတငျပျေါက ဇာတျဝငျခနျးရိုကျကှငျးကို ပရိသတျတှေ စိတျဝငျစားခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါ စပှနျဆာ ဆိုတဲ့ရုပျရှငျဇာတျကားကို နတေိုး၊ရဲလေး၊ ကြျောကြျော၊ ပိုငျဖွိုးသု၊ မွတျကသေီအောငျ၊ခြောကလြာ နဲ့ အဖွားသောအနုပညာရှငျပေါငျးမြားစှာ ပါဝငျခဲ့ကွပွီး ဒါရိုကျတာ အောငျဇျောလငျး က ရိုကျကူးပုံဖျောထားတာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ သူတို့ရဲ့ ရိုကျကှငျးပျေါက ပုံရိပျတဈခြို့ကိုလဲ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ခဈြရတဲ့ မိုမိုလေးခဈြပရိသတျကွီး ရှငျလနျးခမျြးမွကွေ့ပါစေ။
Author admin adminPosted on March 20, 2018 Categories အထွေထွေLeaveacomment on လူပြောများနေတဲ့ မြတ်ကေသီအောင် နဲ့ နေတိုးတို့ ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း
အရမ်းလှတဲ့ကောင်မလေး နဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့နေတဲ့ ကောင်လေးတို့ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချစ်ဇာတ်လမ်း
ပျော်စရာအဆုံးသတ်ဆိုတာ ရှိကြောင်းသူတို့ရဲ့အချစ်ကသက်သေပြနေပါတယ် ။ အချစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှသေချာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး ။ တချို့လူတွေကလည်းအရာအားလုံးကိုလက်ခံပေးနိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြသလို
တချို့ကြတော့လည်း မည်သည့်အခြေအနေ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နဲ့မသက်ဆိုင်ပဲ ပွင့်ဖူးလာတဲ့အရာတစ်ခုလို့ပြောကြပါတယ် ။ တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာကို သဘာဝအတိုင်း ခံစားရုံပါပဲ ။
လူအများစုကတော့ အပြင်ပိုင်းကိုကြည့်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရွေးချယ်ကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် လူအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သေချာတာတစ်ခုက အချစ်ဆိုတာ တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းမဟုတ်ဘူး ။ မပြည့်စုံတဲ့အတွဲတွေကိုကြည့်မှသာဒီအချက်ကိုသေချာမြင်နိုင်မှာပါ ။ အခု Elo နဲ့ Mara စုံတွဲ ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ ။
Mara ဟာချောမောလှပပြီးတော့ ယောကျာ်းတွေလိုချင်ကြတဲ့အိမ်မက်ထဲကမိန်းကလေးလိုမျိုး ပြည့်စုံတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ Elo ကတော့ အရပ်အရမ်းပုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူမပြည့်စုံသလိုခံစားနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ။ ဒါပေမယ့် ကံကြမ္မာက သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွဲဖက်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
နောက်ဆုံးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြပြီး မင်္ဂလာပွဲဟာခမ်းနားခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ဧည့်သည်တွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ အခုလိုသစ္စာပြုခဲ့ကြပါတယ် ။
“ကိုယ် ဘုရားသခင်ကို မေးခဲ့တယ်…ဘာကြောင့်လဲ…ဘာကြောင့်ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့.. ဒါပေမယ့် မင်းကိုယ့်ရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီမေးခွန်းအားလုံးရဲ့အဖြေဟာမင်းပဲဆိုတာ ကိုယ်သိလိုက်တယ် ။ မပြည့်စုံတဲ့ Elo အတွက် ပြည့်စုံလွန်းတဲ့ Mara ကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက် တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုရားသခင်” လို့ Elo ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
Mara ကလည်း သူဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့သူတစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်း အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
“ရှင့်ကိုတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုချစ်သွားမှာပါ ၊ကျွန်မတို့ရဲ့အချစ်ထက်ဘယ်အရာမှပိုအရေးမပါပါဘူး ၊ ကျွန်မရဲ့မပြည့်စုံမှုတွေရှိနေတာတောင်မှ ကျွန်မကိုရွှေလိုမျိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ၊ ဘုရားသခင်က ကျွန်မကို ရှင့်အတွက် ကူညီပေးဖို့ဖန်တီးပေးလိုက်တာဆိုတာ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ် ၊ ကြယ်တွေကိုဆွတ်ခူးနိုင်မယ့်လက်တစ်ခုအဖြစ် အဝေးကြီးကိုလှမ်းလျောက်နိုင်မယ့် ခြေတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်မရှင့်ဘေးမှာနေသွားပေးမှာပါ ၊ ကျွန်မရဲ့လက်တွေခြေတွေဟာ ရှင့်အတွက်ဖြစ်တည်ခဲ့တာပါ” လိုိ့Mara ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလက်ထက်ပွဲအခမ်းအနားဟာ အခြားလက်ထပ်ပွဲတွေလို ငိုသံတွေဆို့နင့်သံတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ။
Church ကျောင်းကိုလာတဲ့ လူတွေရဲ့ နှလုံးသားကို အရည်ပျော်သွားစေပြီးတော့ အပျော်လွန်ပြီးမျက်ရည်တွေပြည့်နှက်နေစေခဲ့ပါတယ် ။ ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး သူတိုရဲ့မိဘတွေဟာသူတို့နဲ့အတူလိုက်ပါမှာဖြစ်ပြီး Elo နဲ့ Mara ရဲ့မိဘတွေဟာ သူတို့ကိုအရမ်းချစ်ခင်ပြီး အရမ်းဂရုစိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ် ။
Elo နဲ့ Mara ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ ကြီးမြတ်တဲ့အချစ်စစ်ရှိကြောင်းကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဆိုရင် Elo နဲ့ Mara မှာ ကျန်းမာပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကလေးလေး Liam လည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လောက် လိုက်ဖက်တဲ့စုံတွဲလဲ….
Writer – Min Thu ( Daily Hot News)
အရမျးလှတဲ့ကောငျမလေး နဲ့ကိုယျအင်ျဂါခြို့တဲ့နတေဲ့ ကောငျလေးတို့ရဲ့စိတျဝငျစားဖှယျအခဈြဇာတျလမျး
ပြျောစရာအဆုံးသတျဆိုတာ ရှိကွောငျးသူတို့ရဲ့အခဈြကသကျသပွေနပေါတယျ ။ အခဈြဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဘယျသူမှသခြောဖျောပွနိုငျခွငျးမရှိသေးပါဘူး ။ တခြို့လူတှကေလညျးအရာအားလုံးကိုလကျခံပေးနိုငျခွငျးလို့အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ကွသလို
တခြို့ကွတော့လညျး မညျသညျ့အခွအေနေ မညျသညျ့အကွောငျးပွခကျြနဲ့မသကျဆိုငျပဲ ပှငျ့ဖူးလာတဲ့အရာတဈခုလို့ပွောကွပါတယျ ။ တကယျတော့ အခဈြဆိုတာကို သဘာဝအတိုငျး ခံစားရုံပါပဲ ။
လူအမြားစုကတော့ အပွငျပိုငျးကိုကွညျ့ပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျရှေးခယျြကွတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လူအားလုံးတော့မဟုတျပါဘူး ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သခြောတာတဈခုက အခဈြဆိုတာ တကိုယျကောငျးဆနျခွငျးမဟုတျဘူး ။ မပွညျ့စုံတဲ့အတှဲတှကေိုကွညျ့မှသာဒီအခကျြကိုသခြောမွငျနိုငျမှာပါ ။ အခု Elo နဲ့ Mara စုံတှဲ ရဲ့အခဈြဇာတျလမျးကိုတဈခကျြလောကျကွညျ့ရှုလိုကျပါ ။
Mara ဟာခြောမောလှပပွီးတော့ ယောကျြားတှလေိုခငျြကွတဲ့အိမျမကျထဲကမိနျးကလေးလိုမြိုး ပွညျ့စုံတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ ။ Elo ကတော့ အရပျအရမျးပုတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျဖွဈပွီးတော့သူ့ကိုယျသူမပွညျ့စုံသလိုခံစားနရေတဲ့သူတဈယောကျပါ ။ ဒါပမေယျ့ ကံကွမ်မာက သူတို့နှဈယောကျကိုတှဲဖကျပေးခဲ့ပါတယျ ။
နောကျဆုံးတော့ သူတို့နှဈယောကျအိမျထောငျပွုခဲ့ကွပွီး မင်ျဂလာပှဲဟာခမျးနားခဲ့ပါတယျ ။ သူတို့နှဈဦးဟာ ဧညျ့သညျတှရေဲ့ရှမှေ့ောကျမှာ အခုလိုသစ်စာပွုခဲ့ကွပါတယျ ။
“ကိုယျ ဘုရားသခငျကို မေးခဲ့တယျ…ဘာကွောငျ့လဲ…ဘာကွောငျ့ကြှနျတေျာ့ကို ဒီလိုလုပျရတာလဲဆိုပွီးတော့.. ဒါပမေယျ့ မငျးကိုယျ့ရှရေ့ောကျလာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီမေးခှနျးအားလုံးရဲ့အဖွဟောမငျးပဲဆိုတာ ကိုယျသိလိုကျတယျ ။ မပွညျ့စုံတဲ့ Elo အတှကျ ပွညျ့စုံလှနျးတဲ့ Mara ကိုပေးခဲ့တဲ့အတှကျ တကယျကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ ဘုရားသခငျ” လို့ Elo ကပွောကွားခဲ့ပါတယျ ။
Mara ကလညျး သူဟာပွီးပွညျ့စုံတဲ့သူတဈယောကျမဟုတျကွောငျး အခုလိုပွောကွားခဲ့ပါတယျ ။
“ရှငျ့ကိုတဈနထေ့ကျတဈနပေို့ခဈြသှားမှာပါ ၊ကြှနျမတို့ရဲ့အခဈြထကျဘယျအရာမှပိုအရေးမပါပါဘူး ၊ ကြှနျမရဲ့မပွညျ့စုံမှုတှရှေိနတောတောငျမှ ကြှနျမကိုရှလေိုမြိုးတနျဖိုးထားတဲ့အတှကျ အရမျးကို ကြေးဇူးတငျမိပါတယျ ၊ ဘုရားသခငျက ကြှနျမကို ရှငျ့အတှကျ ကူညီပေးဖို့ဖနျတီးပေးလိုကျတာဆိုတာ ကြှနျမယုံကွညျပါတယျ ၊ ကွယျတှကေိုဆှတျခူးနိုငျမယျ့လကျတဈခုအဖွဈ အဝေးကွီးကိုလှမျးလြောကျနိုငျမယျ့ ခွတေဈခုအဖွဈ ကြှနျမရှငျ့ဘေးမှာနသှေားပေးမှာပါ ၊ ကြှနျမရဲ့လကျတှခွေတှေဟော ရှငျ့အတှကျဖွဈတညျခဲ့တာပါ” လို့Mara ကပွောကွားခဲ့ပါတယျ ။
ဒီလကျထကျပှဲအခမျးအနားဟာ အခွားလကျထပျပှဲတှလေို ငိုသံတှဆေို့နငျ့သံတှနေဲ့အဆုံးသတျခဲ့တာမဟုတျပါဘူး ။
Church ကြောငျးကိုလာတဲ့ လူတှရေဲ့ နှလုံးသားကို အရညျပြျောသှားစပွေီးတော့ အပြျောလှနျပွီးမကျြရညျတှပွေညျ့နှကျနစေခေဲ့ပါတယျ ။ ခရီးစဉျတဈခုလုံး သူတိုရဲ့မိဘတှဟောသူတို့နဲ့အတူလိုကျပါမှာဖွဈပွီး Elo နဲ့ Mara ရဲ့မိဘတှဟော သူတို့ကိုအရမျးခဈြခငျပွီး အရမျးဂရုစိုကျတယျလို့ပွောနိုငျပါတယျ ။
Elo နဲ့ Mara ရဲ့အခဈြဇာတျလမျးဟာ ကွီးမွတျတဲ့အခဈြစဈရှိကွောငျးကိုသကျသပွေနိုငျခဲ့တဲ့အရာတဈခုပဲဖွဈပါတယျ ။ အခုဆိုရငျ Elo နဲ့ Mara မှာ ကနျြးမာပွီးခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ကလေးလေး Liam လညျးရှိနပွေီဖွဈပါတယျ ဘယျလောကျ လိုကျဖကျတဲ့စုံတှဲလဲ….
Author admin adminPosted on March 20, 2018 Categories အထွေထွေLeaveacomment on အရမ်းလှတဲ့ကောင်မလေး နဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့နေတဲ့ ကောင်လေးတို့ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချစ်ဇာတ်လမ်း
နာရီေ ကြာ်ငြာေ တွ မှာ ပါ တဲ့ နာ ရီေ တွ အားလုံး က ဘာဖြစ် လို့ ၁၀ နာ ရီ ၁၀ မိနစ် ကို ပဲ ပြေ န ရ တာ လဲ? ￼
နာရီေ ကြာ်ငြာေ တွ မှာ ပါ တဲ့ နာ ရီေ တွ အားလုံး က ဘာဖြစ် လို့ ၁၀ နာ ရီ ၁၀ မိနစ် ကို ပဲ ပြေ န ရ တာ လဲ?
နာရီကြော်ငြာအားလုံးနီးပါးမှာ နာရီလက်တံတွေက ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်ကိုပဲ ချိန်ညှိထားတာကို သင်တို့ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီလို ချိန်ထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှန်းဆချက်တွေ အမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
တချို့က အေဗရာဟမ်လင်ကွန်း၊ ကနေဒီနဲ့ မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာတို့ လုပ်ကြံခံရတဲ့ အချိန်တွေကို မှတ်မိအောင် လုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုကြပြီး တချို့ ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံအပေါ် အနုမြူဗုံးကြဲချတဲ့အချိန်ကို ညွှန်းဆိုထားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထက်ပါ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာ အခြား အချိန်တွေဖြစ်ပြီး ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်နဲ့ မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
နာရီကြော်ငြာတွေမှာ နာရီလက်တံတွေကို ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ထားရှိရခြင်းကတော့ အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်-
(၁) နာရီလက်တံများသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု မထပ်သောကြောင့် နာရီဒိုင်ခွက်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် လက်တံများကို ရှင်းလင်းစွာမြင်ရခြင်း၊
(၂) လူအများစုသည် ခေါက်ချိုးညီခြင်းကို ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းကြောင့် နာရီလက်တံများကို ခေါက်ချိုးညီစွာ ထားလိုက်ခြင်းဖြင့် နာရီကို လိုချင်စဖွယ်ဖြစ်စေခြင်း၊
(၃) နံပါတ် ၁၂ ၏ အောက်ဖက်ရှိ နာရီတံဆိပ်ကို ရှင်းလင်းပြတ်သား စွာ တွေ့မြင်နိုင်စေရုံသာမက နာရီလက်တံ များဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေ၍ ကြော်ငြာ၌ ထင်ရှားနေခြင်း၊
(၄) နံပါတ် ၃၊ ၆ နှင့် ၉ တို့အနီးတွင်ထားလေ့ရှိသည့် နေ့စွဲအကွက်များ၊ စက္ကန့်ဒိုင်ခွက်များကို ဖုံးကွယ်ထားမှုမရှိခြင်း၊
(၅) ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ်တွင် နာရီလက်တံများ ထားရှိပါက ခေါက်ချိုးညီရန် လွယ်ကူသော်လည်း ရုတ်တရက်ကြည့်လျှင် မှုန်ကုပ်ကုပ်မျက်နှာနှင့် ဆင်တူသောကြောင့် ပျော်ရွှင်သော မျက်နှာဖြစ်စေရန် ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ (နာရီတံဆိပ်ကို နံပါတ် ၆၏ အပေါ်တွင် ထားရှိသော အချို့နာရီများ၏ ကြော်ငြာတွင် လက်တံများကို ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ် တွင်ထားလေ့ရှိသည်။)
စာကြွင်း။ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ထားရှိသော နာရီလက်တံများ သည် ပြည့်စုံစွာ ခေါက်ချိုးညီခြင်းမရှိပေ။ နာရီကို ပြသော လက်တံသည် နံပါတ် ၁၁ ဖက်သို့ ခြောက်ပုံတစ်ပုံခန့်ရွေ့လျားနေသည်။ ပြည့်စုံသော ခေါက်ချိုးညီမှုကို ရရှိရန် နာရီလက်တံများကို ၁၀ နာရီ ကိုးမိနစ် ၃၆ စက္ကန့်တွင် ထားရှိရန် လိုအပ်သည်။
Writer: Htoo2 Lay
နာရီေ ကျွာငွာေ တှ မှာ ပါ တဲ့ နာ ရီေ တှ အားလုံး က ဘာဖွဈ လို့ ၁၀ နာ ရီ ၁၀ မိနဈ ကို ပဲ ပွေ န ရ တာ လဲ?
နာရီကွျောငွာအားလုံးနီးပါးမှာ နာရီလကျတံတှကေ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနဈကိုပဲ ခြိနျညှိထားတာကို သငျတို့ တှဖေူ့းကွမှာပါ။ အဲဒီလို ခြိနျထားတာနဲ့ ပတျသကျပွီး မှနျးဆခကျြတှေ အမြိုးမြိုး ပျေါထှကျခဲ့ပါတယျ။
တခြို့က အဗေရာဟမျလငျကှနျး၊ ကနဒေီနဲ့ မာတငျလူသာကငျးဂြူနီယာတို့ လုပျကွံခံရတဲ့ အခြိနျတှကေို မှတျမိအောငျ လုပျထားတယျလို့ ဆိုကွပွီး တခြို့ ကတော့ ဂပြနျနိုငျငံအပျေါ အနုမွူဗုံးကွဲခတြဲ့အခြိနျကို ညှနျးဆိုထားတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အထကျပါ ကိစ်စတှေ ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့အခြိနျတှဟော အခွား အခြိနျတှဖွေဈပွီး ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနဈနဲ့ မညျသို့မြှ မသကျဆိုငျပါဘူး။
နာရီကွျောငွာတှမှော နာရီလကျတံတှကေို ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနဈတှငျ ထားရှိရခွငျးကတော့ အောကျပါအကွောငျးမြားကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ-
(၁) နာရီလကျတံမြားသညျ တဈခုနှငျ့ တဈခု မထပျသောကွောငျ့ နာရီဒိုငျခှကျ၏ ဒီဇိုငျးနှငျ့ လကျတံမြားကို ရှငျးလငျးစှာမွငျရခွငျး၊
(၂) လူအမြားစုသညျ ခေါကျခြိုးညီခွငျးကို ပိုမိုကွိုကျနှဈသကျခွငျးကွောငျ့ နာရီလကျတံမြားကို ခေါကျခြိုးညီစှာ ထားလိုကျခွငျးဖွငျ့ နာရီကို လိုခငျြစဖှယျဖွဈစခွေငျး၊
(၃) နံပါတျ ၁၂ ၏ အောကျဖကျရှိ နာရီတံဆိပျကို ရှငျးလငျးပွတျသား စှာ တှမွေ့ငျနိုငျစရေုံသာမက နာရီလကျတံ မြားဖွငျ့ ဘောငျခတျထားသကဲ့သို့ ဖွဈနေ၍ ကွျောငွာ၌ ထငျရှားနခွေငျး၊
(၄) နံပါတျ ၃၊ ၆ နှငျ့ ၉ တို့အနီးတှငျထားလရှေိ့သညျ့ နစှေဲ့အကှကျမြား၊ စက်ကနျ့ဒိုငျခှကျမြားကို ဖုံးကှယျထားမှုမရှိခွငျး၊
(၅) ၈ နာရီ ၂၀ မိနဈတှငျ နာရီလကျတံမြား ထားရှိပါက ခေါကျခြိုးညီရနျ လှယျကူသျောလညျး ရုတျတရကျကွညျ့လြှငျ မှုနျကုပျကုပျမကျြနှာနှငျ့ ဆငျတူသောကွောငျ့ ပြျောရှငျသော မကျြနှာဖွဈစရေနျ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနဈတှငျ ထားရှိခွငျးဖွဈသညျ။ (နာရီတံဆိပျကို နံပါတျ ၆၏ အပျေါတှငျ ထားရှိသော အခြို့နာရီမြား၏ ကွျောငွာတှငျ လကျတံမြားကို ၈ နာရီ ၂၀ မိနဈ တှငျထားလရှေိ့သညျ။)
စာကွှငျး။ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနဈတှငျ ထားရှိသော နာရီလကျတံမြား သညျ ပွညျ့စုံစှာ ခေါကျခြိုးညီခွငျးမရှိပေ။ နာရီကို ပွသော လကျတံသညျ နံပါတျ ၁၁ ဖကျသို့ ခွောကျပုံတဈပုံခနျ့ရှလြေ့ားနသေညျ။ ပွညျ့စုံသော ခေါကျခြိုးညီမှုကို ရရှိရနျ နာရီလကျတံမြားကို ၁၀ နာရီ ကိုးမိနဈ ၃၆ စက်ကနျ့တှငျ ထားရှိရနျ လိုအပျသညျ။
Author admin adminPosted on March 19, 2018 Categories အထွေထွေLeaveacomment on နာရီေ ကြာ်ငြာေ တွ မှာ ပါ တဲ့ နာ ရီေ တွ အားလုံး က ဘာဖြစ် လို့ ၁၀ နာ ရီ ၁၀ မိနစ် ကို ပဲ ပြေ န ရ တာ လဲ? ￼
လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ် ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ..
အရေးကြုံ ရင် အား ကိုးရှာစမြဲပါ ။
တခါတရံ အလွန်အမင်း သတ္တိရှိပါတယ် ဆိုတဲ့
သူတွေတောင် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း
ကြုံတွေ့လာရင် အားငယ်ကြောက်စိတ်တွေ ဝင်လာတက်ပါတယ် ..
အဲ့လို အချိန်အခါ မျိူးမှာ အားက်ုးရှာတက်ပါတယ်။
ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ အနန္တော အနန္တငါးပါး အား တိုင်တည် တက်သိမှတ်သမျှ ဂါထာ တွေ ရွတ်ပေါ့ …..
ဒါနဲ့ အားမရဘူး ဆိုပါတော့..!
မိမိ အား စောင့်ရှောက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ် ရှိတာပဲ..
ဘာအရေးလဲ ..? ဘာ ကြောက်ရမလဲ …?
မိမိ အစောင့်က ဖယ်ရှား ပစ်လိမ့်မယ်..
ဒီအချက်ကို ကြိုတင်သိပြီး ကိုးကွယ်ချင်မှာပဲ..
မိမိ အား စောင့်သော ပုဂ္ဂိုလ် ကို မဟာဘုတ် အရတွက်ကြည့် လို့ရပါတယ် ….
မိမိ အား စောင့်ရှောက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ် ကို
ယုံကြည်စွာ ကိုးကွယ်နိုင်ပါက ရန်အပေါင်းကင်းကွာ လာဘ်ရွှင် အကျိူးများ ခံစား ရပြီး …
မိမိအား စောင့်ရှောက်သော ပုဂ္ဂိုလ် များ က ကောင်း စွာ စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်…
မွေးတဲ့ ခုနှစ် လ ရက် နေ့ နာရီ တို့ကို မဟာဘုတ် (၅) ခွင် ချရပါမယ် ။
၁။ မူလ သက္ကရာဇ် ကို တည် (၇) နဲ့စား ရတဲ့ အကြွင်း ကို မဟာဘုတ် တိုင်ထူ ပါ ။
၂။ မွေးတဲ့လ ကို တန်ခူး လမှ စ၍ ရေတွက် ရတဲ့သင်္ချာ ကို (၇) နဲ့ စား ရတဲ့ အကြွင်း ကို မဟာဘုတ်တိုင်ထူပါ ။
၃။ မွေးတဲ့ရက်ကို လပြည့်ကျော်ရင် (၁၅) နဲ့ ထပ်ပေါင်း ပြီး ရတဲ့ နံပတ်ကို (၇) နဲ့စား အကြွင်း ကို မဟာဘုတ် တိုင်ထူပါ ။
၄။ မွေးတဲ့နေ့ ကို မဟာဘုတ်တိုင်ထူပါ။
၅။ မွေးတဲ့အချိန်ကို (၇) နဲ့စား ရတဲ့အကြွင်း ကို
မဟာဘုတ် တိုင်ထူပါ ။ ( မိနစ်စွန်းလျှင် နာရီ မှာ(၁) တိုးရပါမယ် )
၆။ အဲ့ဒီ မဟာဘုတ် (၅) ခွင်မှာ မူလ ဘုတ် ဟောခွင် ( မူလ သက္ကရာဇ် မွေးနံ ) ဋ္ဌာန က ဂြိုလ် လေးလုံး ကိုယူ ပြီး သင်္ချာအရ ပေါင်း မွေးနံပါ သင်္ချာ ကိုပါ ထပ်ပေါင်း … ပြီးရင် (၇) နဲ့စား ပါ ။
ရတဲ့ အကြွင်း ကို မဟာဘုတ် တိုင် ပြန်ထူပါ ။
အဖြေ ဟောကိန်း တွေကတော့…?
တနင်္ဂနွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် ထွက်ရပ်ပေါက် လူပုဂ္ဂိုလ် စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ကြီးများ .. ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဘဝက ဖခင် .. အတိပ်ဘဝက ဖခင်.. ဝိဇ္ဇာကြီးများ ကစောင့်ရှောက်ပါတယ်။
တနင်္လာ… ဖြစ်ခဲ့ရင် ကွမ်ရင်မယ်တော် ဘဝဟောင်းကမိခင် လက်ရှိဘဝ မှာ ကွယ်လွန်သွားသောမိခင် ကြီးဒေါ် အဒေါ် လက္ခုမီး မယ်တော် များ ကစောင့်ရှောက်ပါတယ်။
အင်္ဂါ …. ဖြစ်ခဲ့ရင် အောက်နတ်(၃၇)မင်း ဇော်ဂျီ များ ရုက္ခစိုးများ မကျွတ်မလွပ်သူများ ( ပရလော
က သား များ ) စန္ဒီမယ်တော် ဂန္ဓဗ္ဗ နတ်မင်းများ
ဗုဒ္ဓဟူး .. ဖြစ်ခဲ့ရင် ဝိဇ္ဇာကြီးများ ( ထုံကျင့်ရပြီးသွားသောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံး ) ရေစောင့်နတ် ရွာစောင့်နတ်ရုက္ခစိုးနတ် ထွက်ရပ်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်များ ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ် များ စောင့်ရှောက်ပါတယ် ။
ကြာသပတေး … ဖြစ်ခဲ့ရင် ဗြဟ္မာကြီးများ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များ ရှင်သီဝလိ ရှင်ဥပဂုတ္တ ရှင်ဗာကူလစသော ရဟန္တာများ အထက်လမ်း ဂိုဏ်းဆရာများပြဒါးဝိဇ္ဇာ အင်းဝိဇ္ဇာ များကစောင့်ရှောက်ပါတယ်။
သောကြာ… ဖြစ်ခဲ့ရင် သူရဿတီမယ်တော်
သံသေဝိဇ္ဇာကြီးများ မိခင်ဘက်က အဖွား ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ သမီးမယ်တော် များ စောင့်ရှောက်ပါတယ် ။
စနေ … ဖြစ်ခဲ့ရင် (၃၇) မင်း အောက်နတ်များ
မကျွတ်မလွပ်သေးသော ပုဂ္ဂိုလ် ( ပရ လောကသား မိမိနှင့်ဆွေမျိူးတော်စပ်ဘူးသူ )
လောကီ ကျင့်စဉ် နဲ့ကျင့်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များ
သမထ နဲ့ ကိစ္စ ပြီးနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များ
ယုံကြည်ခြင်း မယုံကြည်ခြင်း သည် သင့်နှင်သာဆိုင်ပါသည်။
အငြင်းပွားဖွယ် ရာ မဖြစ်လိုသော post တစ်ပုဒ်ဟု့ မှတ်ယူပါ။
လွန်ခဲ့သော (၁၈) နှစ်က သင်ကြားပြသပေး
သွားပါသော ဆရာ အား ဦးညွှတ်လျက်..
လူတိုငျးမှာ ကိုယျ့ကိုစောငျ့ရှောကျနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရှိပါတယျ ဘယျပုဂ်ဂိုလျစောငျ့ရှောကျနသေလဲ သိခငျြရငျ တှကျကွညျ့ပါ..
အရေးကွုံ ရငျ အား ကိုးရှာစမွဲပါ ။
တခါတရံ အလှနျအမငျး သတ်တိရှိပါတယျ ဆိုတဲ့
သူတှတေောငျ အခကျအခဲ အကပျြအတညျး
ကွုံတှလေ့ာရငျ အားငယျကွောကျစိတျတှေ ဝငျလာတကျပါတယျ ..
အဲ့လို အခြိနျအခါ မြိူးမှာ အားကျုးရှာတကျပါတယျ။
ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ အနန်တော အနန်တငါးပါး အား တိုငျတညျ တကျသိမှတျသမြှ ဂါထာ တှေ ရှတျပေါ့ …..
ဒါနဲ့ အားမရဘူး ဆိုပါတော့..!
မိမိ အား စောငျ့ရှောကျနသေော ပုဂ်ဂိုလျ ရှိတာပဲ..
ဘာအရေးလဲ ..? ဘာ ကွောကျရမလဲ …?
မိမိ အစောငျ့က ဖယျရှား ပဈလိမျ့မယျ..
ဒီအခကျြကို ကွိုတငျသိပွီး ကိုးကှယျခငျြမှာပဲ..
မိမိ အား စောငျ့သော ပုဂ်ဂိုလျ ကို မဟာဘုတျ အရတှကျကွညျ့ လို့ရပါတယျ ….
မိမိ အား စောငျ့ရှောကျနသေော ပုဂ်ဂိုလျ ကို
ယုံကွညျစှာ ကိုးကှယျနိုငျပါက ရနျအပေါငျးကငျးကှာ လာဘျရှငျ အကြိူးမြား ခံစား ရပွီး …
မိမိအား စောငျ့ရှောကျသော ပုဂ်ဂိုလျ မြား က ကောငျး စှာ စောငျ့ရှောကျပါလိမျ့မယျ…
မှေးတဲ့ ခုနှဈ လ ရကျ နေ့ နာရီ တို့ကို မဟာဘုတျ (၅) ခှငျ ခရြပါမယျ ။
၁။ မူလ သက်ကရာဇျ ကို တညျ (၇) နဲ့စား ရတဲ့ အကွှငျး ကို မဟာဘုတျ တိုငျထူ ပါ ။
၂။ မှေးတဲ့လ ကို တနျခူး လမှ စ၍ ရတှေကျ ရတဲ့သခငြ်္ာ ကို (၇) နဲ့ စား ရတဲ့ အကွှငျး ကို မဟာဘုတျတိုငျထူပါ ။
၃။ မှေးတဲ့ရကျကို လပွညျ့ကြျောရငျ (၁၅) နဲ့ ထပျပေါငျး ပွီး ရတဲ့ နံပတျကို (၇) နဲ့စား အကွှငျး ကို မဟာဘုတျ တိုငျထူပါ ။
၄။ မှေးတဲ့နေ့ ကို မဟာဘုတျတိုငျထူပါ။
၅။ မှေးတဲ့အခြိနျကို (၇) နဲ့စား ရတဲ့အကွှငျး ကို
မဟာဘုတျ တိုငျထူပါ ။ ( မိနဈစှနျးလြှငျ နာရီ မှာ(၁) တိုးရပါမယျ )
၆။ အဲ့ဒီ မဟာဘုတျ (၅) ခှငျမှာ မူလ ဘုတျ ဟောခှငျ ( မူလ သက်ကရာဇျ မှေးနံ ) ဋ်ဌာန က ဂွိုလျ လေးလုံး ကိုယူ ပွီး သခငြ်္ာအရ ပေါငျး မှေးနံပါ သခငြ်္ာ ကိုပါ ထပျပေါငျး … ပွီးရငျ (၇) နဲ့စား ပါ ။
ရတဲ့ အကွှငျး ကို မဟာဘုတျ တိုငျ ပွနျထူပါ ။
အဖွေ ဟောကိနျး တှကေတော့…?
တနင်ျဂနှေ ဖွဈခဲ့ရငျ ထှကျရပျပေါကျ လူပုဂ်ဂိုလျ စတဲ့ပုဂ်ဂိုလျထူး ကွီးမြား .. ကှယျလှနျသှားပွီဖွဈတဲ့ ဘဝက ဖခငျ .. အတိပျဘဝက ဖခငျ.. ဝိဇ်ဇာကွီးမြား ကစောငျ့ရှောကျပါတယျ။
တနင်ျလာ… ဖွဈခဲ့ရငျ ကှမျရငျမယျတျော ဘဝဟောငျးကမိခငျ လကျရှိဘဝ မှာ ကှယျလှနျသှားသောမိခငျ ကွီးဒျေါ အဒျေါ လက်ခုမီး မယျတျော မြား ကစောငျ့ရှောကျပါတယျ။
အင်ျဂါ …. ဖွဈခဲ့ရငျ အောကျနတျ(၃၇)မငျး ဇျောဂြီ မြား ရုက်ခစိုးမြား မကြှတျမလှပျသူမြား ( ပရလော
က သား မြား ) စန်ဒီမယျတျော ဂန်ဓဗ်ဗ နတျမငျးမြား
ဗုဒ်ဓဟူး .. ဖွဈခဲ့ရငျ ဝိဇ်ဇာကွီးမြား ( ထုံကငျြ့ရပွီးသှားသောပုဂ်ဂိုလျအားလုံး ) ရစေောငျ့နတျ ရှာစောငျ့နတျရုက်ခစိုးနတျ ထှကျရပျပေါကျပုဂ်ဂိုလျမြား ရဟနျး ပုဂ်ဂိုလျ မြား စောငျ့ရှောကျပါတယျ ။
ကွာသပတေး … ဖွဈခဲ့ရငျ ဗွဟ်မာကွီးမြား ရဟန်တာပုဂ်ဂိုလျမြား ရှငျသီဝလိ ရှငျဥပဂုတ်တ ရှငျဗာကူလစသော ရဟန်တာမြား အထကျလမျး ဂိုဏျးဆရာမြားပွဒါးဝိဇ်ဇာ အငျးဝိဇ်ဇာ မြားကစောငျ့ရှောကျပါတယျ။
သောကွာ… ဖွဈခဲ့ရငျ သူရဿတီမယျတျော
သံသဝေိဇ်ဇာကွီးမြား မိခငျဘကျက အဖှား ကှယျလှနျပွီးဖွဈတဲ့ သမီးမယျတျော မြား စောငျ့ရှောကျပါတယျ ။
စနေ … ဖွဈခဲ့ရငျ (၃၇) မငျး အောကျနတျမြား
မကြှတျမလှပျသေးသော ပုဂ်ဂိုလျ ( ပရ လောကသား မိမိနှငျ့ဆှမြေိူးတျောစပျဘူးသူ )
လောကီ ကငျြ့စဉျ နဲ့ကငျြ့နသေော ပုဂ်ဂိုလျမြား
သမထ နဲ့ ကိစ်စ ပွီးနသေော ပုဂ်ဂိုလျမြား
ယုံကွညျခွငျး မယုံကွညျခွငျး သညျ သငျ့နှငျသာဆိုငျပါသညျ။
အငွငျးပှားဖှယျ ရာ မဖွဈလိုသော post တဈပုဒျဟု့ မှတျယူပါ။
လှနျခဲ့သော (၁၈) နှဈက သငျကွားပွသပေး
သှားပါသော ဆရာ အား ဦးညှတျလကျြ..
Author admin adminPosted on March 19, 2018 Categories အထွေထွေLeaveacomment on လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ် ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေသလဲ သိချင်ရင် တွက်ကြည့်ပါ..
ဒူဘိုင်းမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ United Arab Emirates ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ ဒုသမ္မတ Skeikh Mohammed bin Rashid Al Moaktoum ဟာ ဒူဘိုင်းမှာ အချမ်းသားဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sheikh Hamdam bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ရဲ့ ဒုတိယသားဖြစ်ပြီးတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ Fezza လို့ခေါ်ပါတယ် ။
Fezza ဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပစ္စည်းတွေကို စုဆောင်းတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သတ္တဝါလေးတွေကို ချစ်တတ်ပြီးတော့ ဘဏ်ထဲမှာ ငွေကြေးအမြောက်အများရှိတဲ့ လူပျိုလူလွတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ Fezza ရဲ့ အသားတင်ဝင်ငွေကိုအတိအကျမသိရပေမယ့် သူဟာ ဘီလျံနာတစ်ယောက်ဖြစ်တာတော့ သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး ။
ဒူဘိုင်းမင်းသားဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို သဘောကျတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို အင်စတာပေါ်မှာတင်ပြီး ထုတ်ကြွားတာမျိုးလုပ်လေ့မရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ ဓါတ်ပုံအရည်အချင်းကိုပဲ အင်စတာမှာ တင်ပြလေ့ရှိပါတယ် ။
အခုကျွန်တော်တို့တင်ပြရမှာကတော့ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ တန်ဖိုးအလွန်ကြီးတဲ့ သာမန်လူတွေစုဆောင်းလေ့မရှိတဲ့အရာတွေလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Fezza က သတ္တဝါလေးတွေကို ချစ်ခင်တဲ့သူလို့ ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ သူက ကုလားအုတ်တွေကိုချစ်တယ်
ဒီကုလားအုတ်ဟာ နယ်နယ်ရရတော့မဟုတ်ဘူး ။ ကုလားအုတ်ပေါင်း ၁၇၀၀၀ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ဘို့အလှပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရခဲ့တဲ့ ကုလားအုတ်တစ်ကောင်ပဲဖြစ်တယ် ။ ဒီကုလားအုတ်ကို ဒေါ်လာ ၂.၇ မီလျံနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.. ။ သင်နားကြားမလွဲပါဘူး…ကုလားအုတ်တစ်ကောင်ကို ၂.၇မီလျံနဲ့ဝယ်ခဲ့တာပါ…. ကုလားအုတ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရခဲ့တဲ့ငွေကြေးကတော့ ဒေါ်လာ ၆ သောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။
၂ . ကုန်းပေါ်ရော ရေပြင်ပါမောင်းနိုင်တဲ့ကား
ဒူဘိုင်းမင်းသားဟာ ဇိမ်ခံကားတွေကိုလည်းသဘောကျပါတယ် ။ ကုန်းပေါ်ရော ရေပြင်ပေါ်ပါမောင်းနိုင်တဲ့ကားတစ်စီးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။ ဒီကားဟာ ကုန်းပေါ်မှာ တစ်နာရီကို မိုင် ၈၀ နဲ့မောင်းနှင်နိုင်ပြီး ရေပြင်ပေါ်မှာတော့ တစ်နာရီ ၄၅ မိုင်နှုန်းနဲ့မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ် ။ ဒီကားကိုအရမ်းသဘောကျတဲ့အတွက် ကား ၆ စီးလုံးကို ဒေါ်လာ ၁သန်းနီးပါးအကုန်အကျခံပြီးဝယ်ယူခဲ့တာပါ ။
၃ . စကော့ ကောင်းကင်ဘုံ
ဒီနယ်မြေကို သူ့အဖေဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ သူလက်ထဲလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီ ။ ဒီမြေဟာ ဧကပေါင်း ၆၃၀၀၀ ကျယ်ဝန်းပါတယ် ။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ၁၄ ထပ်ပါဝင်တဲ့အပန်းဖြေခန်းတစ်ခုကို ရေကန်ဘေးနားမှာဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် စီစဉ်ထားပါတယ် ။
၄. ကနေဒါက ဈေးအကြီးဆုံး ပန့်ဟောက် ကွန်ဒို
ကနေဒါက ဈေးအကြီးဆုံး ပန့်ဟောက်ကွန်ဒိုကို ပိုင်တဲ့သူကတော့ ဒူဘိုင်းမင်းသားပါပဲ ။
၅ . Palm Jumerirah Zabeel Saray
သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အထဲမှာ အလှပဆုံးအဆောက်အဦးတစ်ခုပဲ ။ ဒီအဆောက်အဦးရဲ့ဟာ သူ့နာမည်နဲ့ထားထားတာမဟုတ်ပေမယ့် ဒီလှပတဲ့ဟော်တယ်ကြီးရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာတော့ မင်းသားက အကြီးဆုံးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။
Fazza နဲ့သူ့မိသားစုဟာ ဘိုးရင် 787-10 ဒရင်းလိုင်နာ အစီး ၄၀ ကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ် ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်အသုံးပြုဖို့မဟုတ်ပဲ ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့အတွက်ပါ ဒီလေယာဉ်တွေဝယ်ဖို့အတွက် ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလျံ လောက်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
၇ . တင့်ကားအုပ်
အမေရိကန်စစ်တပ်မှာလည်း ဒီလိုတင့်ကားတွေရှိပါတယ် ။ တစ်စီးကို ဒေါ်လာ ၅ သိန်းအထက်မှာရှိပါတယ် ။ Fazza ကတော့ တစ်စီးထဲမဟုတ်ပါဘူး…တင့်ကားအုပ်လိုက် ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ။
Lamborghini Veneno Roadster 2014 ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကား ၉ စီးအနက်မှာ ၆ စီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။ 6.5 လီတာ V12 အင်ဂျင်နဲ့ မြင်းကောင်ရေ ၇၅၀ အားထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီကားဟာတစ်နာရီကို ၂၂၁ မိုင်အထိပြေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒီကားတွေဝယ်ယူဖို့အတွက် ဒေါ်လာ ၂၇ မီလျံသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
၉ .McLaren P1
တရားဝင်ထွက်လာခြင်းမရှိသေးတဲ့ ဒီကားကို ပထမဆုံးဝယ်ယူခဲ့တာကတော့ Fazza ပါပဲ ။ ဒီစူပါကားဟာ သုံးစက္ကန့်အတွင်း မိုင် ၆၀ နှုန်းရောက်နိုင်ပြီးတော့ တစ်နာရီကို ၂၁၇ မိုင်အထိမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ် ။
ပထမ Ferrari ကားကတော့ Limited Edition နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ Ferrari Laferrari ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒုတိယ Ferrari ကားကတော့ Ferrari F12 Berlinetta ပဲဖြစ်ပါတယ်… ။ဒီကားတွေဟာ ၂.၈ စက္ကန့်အတွင်းမှာ မိုင် ၆၀ နှုန်းရောက်နိုင်ပါတယ် ။
ဒီ Butaggi Veyron ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး Sportcar ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ် ။ ဒီကားဟာ တစ်နာရီကို မိုင် ၂၅၀ အထိပြေးနိုင်ပြီး ၁.၇ မီလျံတန်ကြေးရှိပါတယ် ။
သူက သင်ထင်ထားတာထက်ပိုချမ်းသာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သားပဲ ။ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ သင့်ကိုရူးသွပ်သွားစေနိုင်ပါတယ် ။ သင်အတွေးအမြင်လေးတွေကို ကောမက်မှာပြောထားခဲ့လို့ရပါတယ် ။
ဒူဘိုငျးမငျးသားပိုငျဆိုငျတဲ့ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး ပစ်စညျးမြား
ဒူဘိုငျးမှာအခမျြးသာဆုံးဖွဈတဲ့ United Arab Emirates ရဲ့ ဝနျကွီးခြုပျလညျးဖွဈတဲ့ ဒုသမ်မတ Skeikh Mohammed bin Rashid Al Moaktoum ဟာ ဒူဘိုငျးမှာ အခမျြးသားဆုံးသူတဈယောကျဖွဈတဲ့ Sheikh Hamdam bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ရဲ့ ဒုတိယသားဖွဈပွီးတော့ သူ့သူငယျခငျြးတှကေတော့ Fezza လို့ချေါပါတယျ ။
Fezza ဟာ တိရိစ်ဆာနျတှကေို စိတျလှုပျရှားဖှယျပစ်စညျးတှကေို စုဆောငျးတတျသူတဈယောကျဖွဈပွီး သတ်တဝါလေးတှကေို ခဈြတတျပွီးတော့ ဘဏျထဲမှာ ငှကွေေးအမွောကျအမြားရှိတဲ့ လူပြိုလူလှတျတဈယောကျဖွဈပါတယျ ။ Fezza ရဲ့ အသားတငျဝငျငှကေိုအတိအကမြသိရပမေယျ့ သူဟာ ဘီလြံနာတဈယောကျဖွဈတာတော့ သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး ။
ဒူဘိုငျးမငျးသားဟာ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို သဘောကတြဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီးတော့ သူ့ခမျြးသာကွှယျဝမှုတှကေို အငျစတာပျေါမှာတငျပွီး ထုတျကွှားတာမြိုးလုပျလမေ့ရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ ဓါတျပုံအရညျအခငျြးကိုပဲ အငျစတာမှာ တငျပွလရှေိ့ပါတယျ ။
အခုကြှနျတျောတို့တငျပွရမှာကတော့ သူပိုငျဆိုငျတဲ့ တနျဖိုးအလှနျကွီးတဲ့ သာမနျလူတှစေုဆောငျးလမေ့ရှိတဲ့အရာတှလေေးပဲဖွဈပါတယျ ။
Fezza က သတ်တဝါလေးတှကေို ခဈြခငျတဲ့သူလို့ ကြှနျတျောတို့ပွောခဲ့တဲ့အတိုငျးပဲ သူက ကုလားအုတျတှကေိုခဈြတယျ
ဒီကုလားအုတျဟာ နယျနယျရရတော့မဟုတျဘူး ။ ကုလားအုတျပေါငျး ၁၇၀၀၀ ဝငျပွိုငျခဲ့တဲ့ ဘို့အလှပွိုငျပှဲမှာ ဆုရခဲ့တဲ့ ကုလားအုတျတဈကောငျပဲဖွဈတယျ ။ ဒီကုလားအုတျကို ဒျေါလာ ၂.၇ မီလြံနဲ့ဝယျယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ.. ။ သငျနားကွားမလှဲပါဘူး…ကုလားအုတျတဈကောငျကို ၂.၇မီလြံနဲ့ဝယျခဲ့တာပါ…. ကုလားအုတျပွိုငျပှဲမှာ ဆုရခဲ့တဲ့ငှကွေေးကတော့ ဒျေါလာ ၆ သောငျးပဲဖွဈပါတယျ ။
၂ . ကုနျးပျေါရော ရပွေငျပါမောငျးနိုငျတဲ့ကား
ဒူဘိုငျးမငျးသားဟာ ဇိမျခံကားတှကေိုလညျးသဘောကပြါတယျ ။ ကုနျးပျေါရော ရပွေငျပျေါပါမောငျးနိုငျတဲ့ကားတဈစီးကိုလညျးပိုငျဆိုငျထားပါတယျ ။ ဒီကားဟာ ကုနျးပျေါမှာ တဈနာရီကို မိုငျ ၈၀ နဲ့မောငျးနှငျနိုငျပွီး ရပွေငျပျေါမှာတော့ တဈနာရီ ၄၅ မိုငျနှုနျးနဲ့မောငျးနှငျနိုငျပါတယျ ။ ဒီကားကိုအရမျးသဘောကတြဲ့အတှကျ ကား ၆ စီးလုံးကို ဒျေါလာ ၁သနျးနီးပါးအကုနျအကခြံပွီးဝယျယူခဲ့တာပါ ။
၃ . စကော့ ကောငျးကငျဘုံ
ဒီနယျမွကေို သူ့အဖဝေယျယူခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ အခုတော့ သူလကျထဲလှဲပွောငျးပေးလိုကျပါပွီ ။ ဒီမွဟော ဧကပေါငျး ၆၃၀၀၀ ကယျြဝနျးပါတယျ ။ နှဈအနညျးငယျအတှငျးမှာ ၁၄ ထပျပါဝငျတဲ့အပနျးဖွခေနျးတဈခုကို ရကေနျဘေးနားမှာဆောကျလုပျဖို့အတှကျ စီစဉျထားပါတယျ ။
၄. ကနဒေါက ဈေးအကွီးဆုံး ပနျ့ဟောကျ ကှနျဒို
ကနဒေါက ဈေးအကွီးဆုံး ပနျ့ဟောကျကှနျဒိုကို ပိုငျတဲ့သူကတော့ ဒူဘိုငျးမငျးသားပါပဲ ။
သူပိုငျဆိုငျတဲ့အထဲမှာ အလှပဆုံးအဆောကျအဦးတဈခုပဲ ။ ဒီအဆောကျအဦးရဲ့ဟာ သူ့နာမညျနဲ့ထားထားတာမဟုတျပမေယျ့ ဒီလှပတဲ့ဟျောတယျကွီးရဲ့ဘုတျအဖှဲ့ဝငျတှထေဲမှာတော့ မငျးသားက အကွီးဆုံးဘုတျအဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ ။
Fazza နဲ့သူ့မိသားစုဟာ ဘိုးရငျ 787-10 ဒရငျးလိုငျနာ အစီး ၄၀ ကိုဝယျယူခဲ့ပါတယျ ။ ကိုယျရေးကိုယျတာအတှကျအသုံးပွုဖို့မဟုတျပဲ ဒူဘိုငျးစီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ အဆငျပွခြေောမှစေ့ဖေို့အတှကျပါ ဒီလယောဉျတှဝေယျဖို့အတှကျ ဒျေါလာ ၁၅ ဘီလြံ လောကျသုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
၇ . တငျ့ကားအုပျ
အမရေိကနျစဈတပျမှာလညျး ဒီလိုတငျ့ကားတှရှေိပါတယျ ။ တဈစီးကို ဒျေါလာ ၅ သိနျးအထကျမှာရှိပါတယျ ။ Fazza ကတော့ တဈစီးထဲမဟုတျပါဘူး…တငျ့ကားအုပျလိုကျ ပိုငျဆိုငျတာဖွဈပါတယျ ။
Lamborghini Veneno Roadster 2014 ခုနှဈမှာ ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ ကား ၉ စီးအနကျမှာ ၆ စီးကိုပိုငျဆိုငျထားပါတယျ ။ 6.5 လီတာ V12 အငျဂငျြနဲ့ မွငျးကောငျရေ ၇၅၀ အားထုတျလုပျပေးနိုငျတဲ့ဒီကားဟာတဈနာရီကို ၂၂၁ မိုငျအထိပွေးနိုငျပါတယျ ။ ဒီကားတှဝေယျယူဖို့အတှကျ ဒျေါလာ ၂၇ မီလြံသုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
တရားဝငျထှကျလာခွငျးမရှိသေးတဲ့ ဒီကားကို ပထမဆုံးဝယျယူခဲ့တာကတော့ Fazza ပါပဲ ။ ဒီစူပါကားဟာ သုံးစက်ကနျ့အတှငျး မိုငျ ၆၀ နှုနျးရောကျနိုငျပွီးတော့ တဈနာရီကို ၂၁၇ မိုငျအထိမောငျးနှငျနိုငျပါတယျ ။
ပထမ Ferrari ကားကတော့ Limited Edition နဲ့ထုတျထားတဲ့ Ferrari Laferrari ကားပဲဖွဈပါတယျ ။ ဒုတိယ Ferrari ကားကတော့ Ferrari F12 Berlinetta ပဲဖွဈပါတယျ… ။ဒီကားတှဟော ၂.၈ စက်ကနျ့အတှငျးမှာ မိုငျ ၆၀ နှုနျးရောကျနိုငျပါတယျ ။
ဒီ Butaggi Veyron ဆိုတဲ့ ကမ်ဘာ့အမွနျဆုံး Sportcar ကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားပါသေးတယျ ။ ဒီကားဟာ တဈနာရီကို မိုငျ ၂၅၀ အထိပွေးနိုငျပွီး ၁.၇ မီလြံတနျကွေးရှိပါတယျ ။
သူက သငျထငျထားတာထကျပိုခမျြးသာတယျလို့ကြှနျတျောတို့ပွောခဲ့သားပဲ ။ အသကျ ၃၅ နှဈအရှယျပဲရှိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့ခမျြးသာကွှယျဝမှုဟာ သငျ့ကိုရူးသှပျသှားစနေိုငျပါတယျ ။ သငျအတှေးအမွငျလေးတှကေို ကောမကျမှာပွောထားခဲ့လို့ရပါတယျ ။
Author admin adminPosted on March 18, 2018 Categories အထွေထွေLeaveacomment on ဒူဘိုင်းမင်းသားပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ပစ္စည်းများ